रियलमै रहेर सन्यास लिने मोड्रिचको इच्छा ! | Hamro Khelkud
एलपीएल : हिमालयन ह्वाइट हाउस र बाल बाटिका विजयी
सोनुलाई समेट्दै बागमतीको टोली घोषणा
‘फ्लप’ इंग्ल्यान्डको ब्याटिङ, चिन्ता अष्ट्रेलियालाई!
बार्सिलोना र सेभिया भिड्दै
बिशाल र सुभाष प्रि–क्वाटरफाइनलमा
रियलमै रहेर सन्यास लिने मोड्रिचको इच्छा !
म्याड्रिड (एजेन्सी)– रियल म्याड्रिडका मिडफिल्डर ब्यालोन डी ओर विजेता लुका मोड्रिचले रियलमा रहरै खेल जीवनबाट सन्यास लिने इच्छा रहेको बताएका छन् । उनले अबको उद्देश्य रियलमै रहेर खेल जीवनबाट विश्राम लिनु रहेको प्रष्ट पारेका हुन् ।
सिजनको सुरुवातमा रियलसँग सम्झौताका विषयमा केहि असन्तुष्ट रहेको भनिएका ३३ वर्षे मोड्रिच इन्टर मिलान जाने चर्चा पनि चलेको थियो । तर, रियल उनलाई क्लबमै रहने विषयमा सहमत गराउन सफल भएको बताइएको छ । उनको पारिश्रमिकमा बृद्धि गरिएको पनि औपचारिक रुपमा भने कुनै निर्णय सार्वजनिक भएको छैन ।
विश्व कप फुटबलमा क्रोएसियालाई फाइनल सम्म पुर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका मोड्रिडले व्यक्तिगत उत्कृष्ट यो वर्षका सबै अवार्ड जितिसकेका छन् । विश्व कपमै उत्कृष्ट खेलाडी चुनिएका उनले फिफा बेस्ट अवार्ड र ब्यालोन डी ओर जितेका थिए । अहिले आएर भने उनले आफु रियलमा खुसी रहेकोको बताएका छन् ।
‘म चाहन्छु की मेरो खेल जीवनको अन्त्य यहि होस् । त्यो मेरो लागि त्यो महत्वपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘मैले माथिल्लो स्तरमा रहेर खेल्नु पर्छ । त्यो आफैंमा सहज छैन ।’ सिजनको सुरुवात मोड्रिचले कमजोर रुपमा गरेका थिए ।
मैदान भित्रको व्यस्तताका कारण उनी केहि थकित भएको अनुमान गरिएको थियो । पछिल्लो समय भने उनी फेरि लयमा देखिएको विश्वास गरिएको छ । उनी लयमा फर्कदा घरेलु लिग र च्याम्पियन्स लिगमा रियलको चुनौति बलियो हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
बुधबार, फागुन १९, २०७७
तेजीमाया र जानुका क्वाटरफाइनलमा
फुटसल लिगको ब्रोडकास्टिङ पार्टनर कान्तिपुर
सविनको दुई गोलमा खुमलटारको जित
नयाँवस्ती र टुसालको बराबरी